dia mbola maro tsy tambo isaina ireo marary eto an-toerana sy any amin’ny faritra tsy fantatra. Amin’ny ankapobeny, mamoy ny ainy tsy fidiny ny ankamaroan’ny marary izay tanora manodidina ny 24 taona avokoa ny ankamaroany raha dimy taona no zandriny indrindra. Mila manana 5 tapitrisa Ar isam-bolana mantsy ny marary iray hanaovana dialyse miaraka amin’ny fanafody isan-karazany sy ny fanaovana analizy raha te ho velona. Ho an’ireo te hanao grefy ny voany indray na “transplantation” dia tsy maintsy any Inde na Frantsa no hanaovana izany izay handoavana volabe manodidina 80.000 Euros eo ho eo ka tsy zakan’ny fahefa-mividin’ny marary. Mba ho fanampiana ny Malagasy mararin’ny voa ary dia fantatra fa hisy ny tetikasa hananganana hopitaly hitsaboana izany eto Antananarivo. Hiarahan’ny firenena Indiana amin’ny alalan’ny masoivohony miasa sy monina eto amintsika sy ny fanjakana izany. Mbola eo am-piketrahana azy ny roa tonta ankehitriny. Raha ny nambaran’ny teo anivon’ny federasiona moa dia mahavita ity fanaovana grefy ny voa ity daholo ireo dokotera eto amintsika saingy ny fitaovana no tsy ampy. Hangatahin’izy ireo ihany koa ny hanokafana ivontoerana fanaovana dyalise ho an’ireo marary any amin’ny faritra.